Fanakorontanana saim-bahoaka: olona efatra nosamborin’ny zandary teny Ivato | NewsMada
Fanakorontanana saim-bahoaka: olona efatra nosamborin’ny zandary teny Ivato
Efa voarara ny manadihady olona avy mifidy, mbola misy nanao ihany, ary saika niteraka savorovoro. Olona efatra nosamborin’ny zandary…
Voasambotra teny Ivato, omaly antoandro, ny olona efatra noho ny fanakorontanana saim-bahoaka. Araka ny voalaza, nanao fanadihadiana ny olona avy nifidy ireo olona ireo, nanontany izay nosafidin’ny mpifidy. Nanomboka nahatezitra ny olona izany ka saika raikitra ny savorovoro. Niditra an-tsehatra ny zandary nisambotra ary nitondra azy ireo natao famotorana teny Ankadilalana. Tsy fanatatra mazava ny tanjon’ireo olona ireo. Efa nazava ny fanazavan’ny Ceni fa tsy azo atao ny manao “enquête” na “sondage” amin’izao vanim-potoam-pifidianana izao. Tsy azo atao koa ny mamoaka “tendances de vote” mialoha ny fotoana. Tsy nanome alalana na iza na iza hanao “sondage” ny Ceni.
Nanazava ihany ny Ceni fa ny Exit-Poll anefa, efa nandefa olona eran’ny biraom-pifidianana maro manerana ny Nosy haka ny hevitr’olona avy nandatsa-bato ahitana ny “tendances de vote”. Rehefa nanontaniana ireo olona avy amin’ny Exit-Poll, nampiseho ny taratasy mazava avy amin’ny Ceni mampahafantatra ireo mpikambana amin’ny biraom-pifidianana samihafa ny fisian’ireo olona mpanao “sondage” ireo.
Nanaovana famotorana ireto voasambotra, ary voalaza fa mbola misy hafa ihany koa nosamborina mitovitovy amin’izao. Mifamahofaho eo ny raharaha momba ireo karazan’olona manao fanadihadiana, mitarika ho an’ny fikorontanan’ny olona. Anatin’ny hafananana tanteraka ny raharaham-pirenena ka mety hiteraka korontana ny toe-javatra kely.